သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ ယခုနှစ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၈,၀၀၀ ကျော်ရှိ - Xinhua News Agency
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့ ရှိ အကြီးဆုံး ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်ဖြစ်သည့် Borella ၌ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပိုးသတ်ဆေးရည်များ ဖြန်းနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကိုလံဘို ၊ ဇွန် ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း ယခုအချိန်ထိ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်မှာ ၈,၁၃၉ ဦးထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ မြို့တော် ကိုလံဘိုမြို့သည် ရောဂါဖြစ်ပွားသူ အရေအတွက် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်း မီဒီယာက ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ၃၀၅ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၈၈ ဦးမှာ ကိုလံမြို့၌ ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားအဆင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ထိန်းချုပ်မှုဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Aruna Jayasekara ၏ မကြာသေးမီက ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဒေသတွင်း Sunday Morning သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အများပြည်သူများ နိုးနိုးကြားကြား ရှိနေကြရန် နှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပိုး ပြန့်နှံမှုအား ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများ ပြုလုပ်ကြရန် ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Aruna Jayasekara က ပြောကြားခဲ့ပြီး ကူးစက်မှုမြင့်မားသည့် ဧရိယာများအား အနီးကပ် စောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်ထားပြီး ယင်းနေရာများသို့ အထူးအလုပ်အဖွဲ့များ စေလွှတ်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရားဝင် ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ ဧပြီလတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁,၈၆၀ ဦးနှင့်အတူ အမြင့်ဆုံး အရေအတွက် ရှိနေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ၏ အခြားလက္ခဏာများ ဖြစ်သည့် ကိုယ်ပူချိန် မြင့်မားခြင်း ၊ အလွန်အကျွံအော့အန်ခြင်း ၊ ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်း ၊ မူးဝေခြင်း တို့ ဖြစ်ပွားပါက ပြည်သူများ အနေဖြင့် ချက်ချင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ရယူကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ (Xinhua)
Over 8,000 dengue infections reported in Sri Lanka this year
COLOMBO, June 21 (Xinhua) — The number of people infected with the dengue fever has risen to 8,139 in Sri Lanka so far this year with the capital Colombo having the highest tally, local media reported Monday.
National Dengue Control Unit Director Dr. Aruna Jayasekara was quoted by the local Sunday Morning newspaper as saying that most recently, 305 confirmed dengue cases were reported and 88 of them in Colombo.
Jayasekara asked the public to remain vigilant and take precautionary measures to help curb the spread of the dengue virus, adding that the high risk areas were being closely monitored, and special work teams had been deployed there.
According to official data, April saw the highest number of dengue cases with 1,860 infections.
Medical experts have urged the public to seek immediate medical service if they suffer high fever, uncontrolled vomiting, abdominal pain, or dizziness among other symptoms of the dengue fever. Enditem
Photo – A health worker sprays chemicals duringadengue control mission in Borella, Colombo, Sri Lanka, on June 6, 2021. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)